हिमानी शाहले यसरी मनाईन् जन्मदिन! पारसलाई निर्मल निवासमा नो इन्ट्री? (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
हिमानी शाहले यसरी मनाईन् जन्मदिन! पारसलाई निर्मल निवासमा नो इन्ट्री? (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १७, २०७८ समय: ११:३८:१४
अषोज १७, २०७८ आइतबार 15
हिमानी शाहको चर्चा उनको सुन्दरताको कारण पनि हुने गर्दछ । पूर्व राजपरिवारको पछिल्लो समयको महत्वपूर्ण सदस्य हिमानी शाह अहिले आफ्नै नाममा ट्रष्ट खोलेर समाजसेवामा ब्यस्त छिन् । उनले आफ्नो ४५ औं जन्मदिन एक पारिवारीक जमघटमा मनाएकी छिन् । उनको जन्मदिन मनाउन हिमानीका छोरा हृदयेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह देखिन्छन् । तर उनका छोरीहरु र उनका श्रीमान् उक्त तस्वीरमा देखिएका छैनन् ।
पूर्व युवराज पारस शाहसँग उनको बैवाहिक जीवन त्यति सुमधुर रहेको पाइएको छैन । उनको र पारसबिच चिसो आएको समाचार बिभिन्न समयमा मिडियामा आइरहन्छन् । तर, महत्वपूर्ण पारिवारिक भेटघाटमा पारस र हिमानी साथै पनि देखिएका तस्वीरहरु सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।
नेपालको राज घराना की पूर्वयुवराज्ञी यिनै हिमानी शाहको सनिबार जन्मदिन परेको थियो । सोही दिन १९७६ मा भारतको राजस्थानमा जन्मे हुर्केकी हिमानी ४५ औं वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनका ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा रहेको बखत तत्कालिन राजदरवारले उनलाई नेपालकै थापाथलीमै जन्मिएको बताएको थियो ।
उनीहरुका एक छोरा हृदयेन्द्र शाह र दुई छोरी पूर्णिका शाह, कृतिका रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा ‘हिमानी ट्रस्ट’ नामक सामाजिक संस्थाबाट हिमानीले समाजसेवामा ब्यस्त छिन् भने छोराछोरीहरु थाइल्याण्डमा बसेर पढाई गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय हिमानी र उनका छोरीहरुले बनाएको टिकटक पनि भाइरल भएको थियो । जन्मदिन मनाउन काठमाण्डौंमै भएका पारस किन पुगेनन् भनेर चर्चाको बिषय बनेको छ । सबै तस्वीर हिमानीको ट्वीटरबाट ।
Last Updated on: October 3rd, 2021 at 11:38 am